China G10 Epoxy Glassfiber Glass laminated Sheet orinasa sy mpanamboatra | Xinxing
G10 epoxy vera vita amin'ny takelaka misy laminated (Normal):Ity vokatra ity dia voadio tamin'ny hafanana avo sy ny fanerena avo amin'ny lamba fibre vita amin'ny vera vita amin'ny epoxy resin. Miaraka amin'ny fananana mekanika sy diélectrika avo lenta, hafanana tsara sy fanoherana ny onja, miaraka amin'ny fahaizan'ny milina tsara; Ity vokatra ity dia afaka mameno ny fenitra ROHS EU, izy io fanondranana betsaka mankany atsimo atsinanana Aisa, Eropa, India, sns.
G10 epoxy vera vita amin'ny vera vita amin'ny takelaka voamarina (Flame retardant) ::Ity vokatra ity dia voahosotra noho ny hafanana avo sy ny tsindry ambony amin'ny lamba fibre elektronika vita amin'ny epoxy resin, ary ampio ny fitaovana miaro amin'ny lelafo mba hahazoana antoka fa ny fanoherana ny afo dia ho UL94 V-0, ny formule resin epoxy dia mitovy amin'ny FR4, fa ny angona teknika dia mitovy amin'ny FR4, ny mpanjifa dia mety afaka misafidy izany hitahiry vola.
G10 dia tsy anarana ara-materialy, fa naoty matanjaka, ny anarana G10 dia avy amin'ny rafitry ny naoty NEMA izay misy ny fenitra "G" amin'ny "base fibre Glass"
Araka ny GB / T 1303.4-2009 herinaratra thermosetting resin indostrialy laminates - Fizarana 4: epoxy resin mafy laminates, IEC 60893-3-2-2011 fitaovana insulate - lozisialy thermosetting resin laminate mafy indostrialy - Fizarana 3-2 amin'ny fitaovana tsirairay famaritana EPGC201.
3. fanoherana ny hamandoana tsara;
4. fanoherana hafanana tsara;
5.Mety tsara machinability;
6. fanoherana ny toetr'andro: Kilasy B, 130 ℃
Ny takelaka vita amin'ny vera epoxy G10 dia ampiasaina amin'ny milina elektrika, fitaovana elektrika ho toy ny faritra miendrika insulate, toy ny mpandika faritra, kabine switch, transformer, DC motor, contactors AC, fitaovana elektrika tsy misy fipoahana, sns. (Mety hijanona amin'ny lelafo) Izy io dia manana mari-pahaizana fanoherana hafanana B, fananana mekanika tsara amin'ny mari-pana antonony, miaraka amin'ny fanodinana sy ny toetran'ny insulation.
11 fiparitahan'ny diélectrique （50Hz) - ≤0.04
Teo aloha: FR4 Hentitra Epoxy Glassfiber Laminated Sheet
Manaraka: 3240 Epoxy phenol aldehyde Glassfiber voaravaka ravin